विद्यालयको पक्की भवन भाडामा, विद्यार्थीको पठनपाठन टहरामा | Citizen Post News
दोलखा । 'मान्छेमा लोभ, लालच र मोह' जागेपछि के हुन्न र ? त्यसैको उदाहरण यतिखेर दोलखाको मेलुङस्थित रहेको एक विद्यालयमा देखिएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक, ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र स्थानीय जनप्रतिनिधिले विद्यालयका विद्यार्थीलाई टहरामा राख्दै आफ्नो भवन बैंकलाई भाडामा लगाएका छन् ।
महाभूकम्पपछि भत्किएको विद्यालय पुर्ननिर्माणपछि विद्यार्थीहरुलाई टहरामै राखेर पक्की भवन सानिमा बैंकलाई भाडामा लगाएपछि स्थानीयस्तरबाट ब्यापक विरोध भइरहेको छ । मेलुङ गाउँपालिका-४ स्थित भिम माध्यामिक विद्यालय बुद्धचोच भेड्पुमा रहेको उक्त विद्यालय सरकारको सहयोगमा पुर्ननिमार्ण भएको थियो । विद्यालयलले पक्की भवन बैंकलाई भाडामा दिँदै विद्यार्थीलाई टहरामै पठनपाठन गराएपछि अहिले ब्यापक विरोध भइरहेको छ ।
स्थानियको व्यापक बिरोधपछि बिद्यालयका प्रधानअध्यापक सचिन थोकरले भबनको बिकल्पमा अन्य घर नभएकाले बैंकलाई दिने सम्झौता गरेको बताएका छन् । उता वडाध्यक्ष छत्रबहादुर तामाङले बिद्यालयमा बैंक राख्दा सहज हुने भएकाले बैंक राख्न स्वीकृति दिइएको बताए । सानिमा बैंकले असार ३२ गते बैकको आफ्नो शाखा उद्घाटन गरेको हो ।
स्थानीय दिलकुमार गोलेले विद्यार्थीहरुले पक्की भवनमै अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने मात्र नभई दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने बताए । उनले भने,'पैसा आउँछ भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यो गर्न कहाँ पाइन्छ ? विद्यालयको भवन बैंकलाई भाडामा दिएर विद्यार्थीलाई टहरामा राख्नु न्यायचित देखिन्न ।' उता बैंकका म्यानेजर अर्जन सापकोटाले बैंकको केन्द्रिय कार्यालय र विद्यालय ब्यवस्थापन समितिबीच भएको सम्झौता अनुसार बैंक स्थापना गरेको बताए ।
बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष अम्मिका गोलेले गाउँपालिकालाई बैंक राख्नुपर्ने भएको अन्यत्र उपयुक्त घर नपाएकाले विद्यालयलाई भवन भाडामा दिएको बताए । स्मरण रहोस्, बैंकको उद्घाटनमा गाउँपालिकाका प्रमुख नरबहादुर श्रेष्ठ, उपप्रमुख कल्पना भण्डारी र वडाध्यक्ष छत्रबहादुर तमाङलगायतको उपस्थिति थियो ।